‘बागमती प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ’ – Karnalisandesh
‘बागमती प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश घोषणा गरिनुपर्छ’
प्रकाशित मितिः ३२ जेष्ठ २०७७, आईतवार १८:४८ June 14, 2020
काठमाडौँ। बागमती प्रदेशकी सांसद कल्पना नेपालीले प्रदेशलाई छुवाछुत मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा जारी प्रदेश सभाको छैटौ अधिबेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो माग गरेकी हुन्।
प्रदेश सभामा सांसद नेपालीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अशः
भनिन्छ, ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन।’ यो त भन्ने कुरा मात्रै रहेछ। यहाँ हाम्रो समाजमा दिलको खेलमा जातको जित भएको सुनिँदैछ। दिल नै छियाछिया हुने खालका घटना भइरहेका छन्। २१औं शताब्दिमा पनि मानव समूदायलाई लज्जित पार्ने गरी जातीय घटनाहरु हुँदैछन्। रुकुम पश्चिममा पूरै गाउँ स्तब्द हुनेगरी हत्या भयो। भविष्यमा निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लागेका ६ जना युवाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो।
कहाँ गयो त्यो ठूलो दिल ? कहाँ गर्यो परिर्वतनका लागि लडिएको जनयुद्ध? प्रेमसँग जोडिएको जात र जातसँग जोडिएको प्रेममा घाटी रेटिएर, हातखुट्टा भाचेर भेरीमा बग्नु पर्यो। जातका कारण मृत्यु अगाल्न बाध्य हुनुपर्यो। यदि दिल थियो भने निर्ममता पूर्वक हत्या गर्दा किन दिलले भन्न सकेन, बाँच्न पाउने अधिकार सबैलाई छ भनेर ?
जातको कारण कसैको कोख कसैको सिउँदो सिन्दुर लुट्नु हुँदैन। दलित हुँदा वा दलितको कोखमा जन्मीदा समाजमा सधै पीडित भएर जिउन पर्ने र धारो, पँधेरा, मन्दीरमा छिर्न नपाइने जस्ता अमानविय पीडा खेप्नुपर्छ। पीडा त घाउ हुनेलाई हुने हो। अरुले त पीडाको बारेमा महसुस मात्रै गर्ने हो। महिना दिन पुग्नै लाग्दा पनि रुकुमको नरसंहारको उचित छानविन भएको छैन।
मृतक युवाहरुका अपराधीहरु कोको हुन् ? पत्ता लागेका छैनन्। पीडित परिवारले उचित राहत पाउन सकेको छैनन्। यो दुःखद कुरा हो। म सम्मानीय सभामुख मार्फत मान्छेको जात मान्छे मात्रै हो, त्यसैले रुकुम घटनाबाट पाठ सिक्दै वागमती प्रदेश सरकारले दलित छुवाछुत मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै रुकुम नरसंहा।का बारेमा वागमति प्रदेश सरकारले न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्न चाहन्छु।